ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုဗီဒီယိုလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ neuroanatomical ဆက်နွယ်မှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၁၀) - Your Brain On Porn
ကိုရီးယား J ကို Radiol ။ 2010 May-Jun;11(3):278-85။ Doi: 10.3348 / kjr.2010.11.3.278 ။ EPub 2010 Aprပြီ 29 ။
Sundaram T က1, Jeong GW, Kim က TH, Kim GW, Baek HS, ကန်ဟောင်ကောင်.
ကျန်းမာသန်စွမ်းအထီးဘာသာရပ်များအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked လိင်စိတ်နှိုးဆော်ခြင်း၏အချိန် - သင်တန်းနှင့်ဆက်စပ်အဓိက ဦး နှောက်ဒေသများ၏တက်ကြွ activation အကဲဖြတ်ရန်။
လက်ျာလက်လိင်မတူသူအမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၄ ဦး သည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်အနားယူချိန်နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သောဗီဒီယိုအမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်မှုကိုစံပိတ်ပင်တားဆီးမှုပုံစံအရအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဓိက ဦး နှောက်ဒေသများ၏ spatiotemporal activation ပုံစံများကိုသရုပ်ဖော်ရန်နှင့်အရေအတွက်တွက်ရန်အတွက် activation ကာလကိုအစောပိုင်း၊ အလယ်အဆင့်နှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်တို့ကဲ့သို့အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားထားသည်။
အုပ်စုရလဒ် (p <0.05) အတွက်၊ MID အဆင့်ကိုအစောပိုင်းအဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသိသိသာသာတိုးလာသည်ကိုပိုမိုနိမ့်သောတိုကျရိုကျ gyrus၊ ဖြည့်စွက်မော်တာ,ရိယာ hippocampus၊ အဆိုပါ caudate နျူကလိယ, midbrain, သာလွန် occipital gyrus နှင့် fusiform gyrus ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အစောပိုင်းအဆင့်ကို MID အဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် putamen, globus pallidus, pons, thalamus, hypothalamus, lingual gyrus နှင့် cuneus တို့သည်များပြားလှသော activation များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ LATE အဆင့်ကို MID အဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဦး နှောက်ဒေသများအားလုံးသည် hippocampus မှအပမြင့်မားသော activation များကိုပြသခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအဆင့်သုံးဆင့်တွင် ဦး နှောက်ဒေသများ၏ spatiotemporal activation ပုံစံများကိုဖော်ပြသည်။
ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း၊ လက်တွေ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI); လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုဒိုင်းနမစ်
ဦး နှောက်ကိုတွေ့ရှိရသည့်လူ့ဘာသာရပ်များမှအကန့်အသတ်ရှိသောအချက်အလက်များ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများ၊ ဦး နှောက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကိုလျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာရှားပါးလေ့လာမှုများနှင့်အထူးသဖြင့်ကြွက်များအသုံးပြုသူများမှရရှိသောအချက်အလက်များမှအဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၊1) ။ သို့သော်လူ့သုတေသနပြုမှုမှတွေ့ရှိချက်များနှင့်အချက်အလက်များသည်မလုံလောက်သေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်မျိုးစိတ်များနှင့်ပတ်သက်သောလက္ခဏာများရှိပြီးလူ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြေအနေ၏ရှုပ်ထွေးသောလွှမ်းမိုးမှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။2) ။ ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ် endogenous အချက်များကြောင့်များသောအားဖြင့်အစပြုလေ့ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်မကြာခဏဆိုသလိုအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းထားသောအစိတ်အပိုင်းလေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သိမြင်မှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်း၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ (3) ။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုများသည်လုံးဝမသိရှိရသေးသော်လည်း၎င်းတို့သည်လှုံ့ဆော်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သက်ရောက်သောတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ခွဲခြားခြင်း (3, 4) ။ နှစ် ဦး စလုံးလိင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုညှိနှိုင်းသောဇီဝကမ္မစနစ်၏ activation အလယ်ပိုင်း arousal, အစွန်အဖျား Non- လိင်အင်္ဂါနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါနှိုးဆော်ခြင်းသို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်5).
ခေတ်သစ် neuroimaging နည်းစနစ်များသည် Vivo အတွက် အာရုံခံသို့မဟုတ်သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်း ဦး နှောက် activation ၏လေ့လာရေး။ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကိုအသုံးပြု။ ယခင်လေ့လာမှုများ (3, 4, 6-8) သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) (9-15) များသောအားဖြင့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ erotica ကဲ့သို့သောလိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုအဓိကထားပြီး၊ ဤလေ့လာမှုများသည် ဦး နှောက်ဆိုင်ရာဒေသများရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ယုတ်ညံ့သည့်ယာယီ gyrus၊ cingulate gyrus၊ အဆိုပါ thalamus, hypothalamus, amygdala, အ caudate နျူကလိယနှင့် globus pallidus ။ fMRI သည်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲခြင်းကိုသွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်မှီခိုသော (BOLD) အချက်ပြရှာဖွေခြင်းဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ဤနည်းသည် PET ထက်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအားသာချက်များရှိသည်။ fMRI သည် noninvasive ဖြစ်ပြီး PET တွင်ကဲ့သို့ radiotracer ဆေးထိုးရန်မလိုအပ်ပါ။ fMRI ၏ယာယီ resolution သည် ပို၍ ကြီးမားသည် လှုံ့ဆော်မှုများကိုစောစီးစွာတုံ့ပြန်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုသော PET၊ fMRI ကိုဘာသာရပ်တစ်ခု၏ ဦး နှောက်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုလေ့လာရန်သာမက PET နှင့် ပို၍ ခက်ခဲသောဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏တုံ့ပြန်မှုများကိုလည်းလေ့လာရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။14, 16, 17).
ထို့အပြင်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လုပ်ဆောင်မှု၏ယာယီအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အရံ / အဆုံးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ခွဲခြားရန်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည် (10, 18) ။ ထို့ကြောင့်၊ ယခုလေ့လာမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအချိန်နှင့်ဆက်နွှယ်သောအဓိက ဦး နှောက်ဒေသများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် 3T fMRI စကင်နာကို အသုံးပြု၍ penile plethysmography မှတဆင့်မည်သည့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ရည်မှန်းချက်နှင့်ပုဂ္ဂလဒိmeasurements္ measurements တိုင်းတာမှုများမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ အဓိက ဦး နှောက်ဒေသများ၏ spatiotemporal activation ပုံစံများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ fMRI ပါရာဒိုင်း၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအစောပိုင်း၊ အလယ်လတ်နှင့်နှောင်းပိုင်းအဆင့်များဖြစ်သည်။ အာရုံကြော activation ။
ဒီလေ့လာမှုကကျန်းမာတဲ့ယောက်ျားများအတွက်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked လိင်စိတ်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ် ဦး နှောက်ကို activation အပေါ်အချိန် - သင်တန်းသတင်းအချက်အလက်အကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင်ပျမ်းမျှအသက် ၂၅ နှစ် (အထွေထွေ ၂၂ မှ ၂၈ အထိ) အထီးဘာသာရပ် ၁၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ ပါ ၀ င်မှုစံနှုန်းများမှာလက်ျာလက်နှင့်လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူများသာဖြစ်သည်။ ချန်လှပ်ထားသည့်သတ်မှတ်ချက်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာမမှန်မကန်ဖော်ပြချက်များအပြင်လက်ရှိဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကုသမှုအထောက်အထားများဖြစ်သည်။ ပါ ၀ င်မည့်အလားအလာရှိသောပါ ၀ င်သူများအား၎င်းတို့သတ်မှတ်ချက်များကိုပြည့်မီကြောင်းသေချာစေရန်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒေသခံကျင့်ဝတ်ကော်မတီကဤလေ့လာမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဘာသာရပ်များသည်၎င်းတို့၏စာဖြင့်ရေးသားအသိပေးချက်ကိုပေးခဲ့သည်။ လေ့လာမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏ဆွဲဆောင်မှုအတိုင်းအတာနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအဆင့် ၅ ဆင့်ဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအားအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
fMRI လေ့လာမှုကို standard block design protocol အရပြုလုပ်သောငြိမ်သက်ခြင်းလုပ်ကွက် ၂ ခုနှင့် ၁ မိနစ်နှင့် ၂ မိနစ် activation လုပ်ကွက် ၂ ခုပါသောလုပ်ကွက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ထားသည်။ rest-activation-rest- activation ။
စတင်လှုပ်ရှားစဉ်ကာလအတွင်းယောက်ျားတစ် ဦး နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး (အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်လိင်အင်္ဂါအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု) အကြားတွင်လိင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများပါ ၀ င်သည်။ ဗီဒီယိုကလစ်ပ်များ၏ပါဝင်မှုကိုယခင်ကစိတ်ပညာရှင်နှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြုခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှထုတ်ယူပြီးနောက် MRI စကင်နာအခန်းအတွင်းရှိဖန်သားပြင်ပေါ်သို့အရည်ကြည်လင်သော display projector မှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကတူညီသောဗွီဒီယိုကလစ်များကိုထိုခေါင်း၏ရှေ့မှောက်ရှေ့သို့ radiofquency coil တွင်တပ်ဆင်ထားသောမှန်၏အကူအညီဖြင့်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ရဲရဲဝံ့ဝံ့အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ရုပ်ပုံများကို TT * အလေးချိန်ပဲ့တင်သံပြတ်ပုံရိပ်ပုံရိပ် (EPI) pulse sequence ကို အသုံးပြု၍ အောက်ပါအချက်များပါဝင်သော TT * အလေးချိန်ပဲ့တင်သံပုံရိပ် (EPI) သွေးခုန်နှုန်းအစီအစဉ်အားဖြင့် 3.0T MR စကင်နာ (Magnetom Trio, Siemens Medical Solutions, Erlangen, Germany) တွင်ရရှိခဲ့သည်။ TR = ၃၀၀၀ ms, TE =2ms, matrix ကိုအရွယ်အစား = 3,000 × 30, FOV = 64 မီလီမီတာ, In- လေယာဉ် voxel အရွယ်အစား = 64 မီလီမီတာ× 220 မီလီမီတာ, လှန်ထောင့် = 3.4 °နှင့်အချပ်အထူ = 3.4 မီလီမီတာ။ 'anterior commissure - posterior commissure' လိုင်းနှင့်အပြိုင် transaxial ချပ် ၂၀ ခန့်ပါ ၀ င်သည့်အလုပ်လုပ်သည့် volumes ပေါင်း ၁၆၀ ကိုစုစုပေါင်းဝယ်ယူခဲ့သည်။
အဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့ဒေတာ preprocessing (19) နှင့်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (20, 21) SPM2 (စာရင်းအင်း Parametric မြေပုံ) software package (Wellcome Department of Cognitive Neurology, London, UK) ကို အသုံးပြု၍ ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက် T1 equilibration effect အတွက်ခွင့်ပြုရန်ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်လုပ်သော ဦး နှောက် volumes နှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ preprocessing အဆင့်များတွင် volumes ကို realign နှင့် reslice လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးပြီးရွေ့လျားမှုတညျ့ခဲ့ကြသည် (22, 23) နှင့်ပုံရိပ်များကို (EPI.mnc SPM template ကိုသုံးပြီးနှင့်ဤ 2x2×2မီလီမီတာ၏ voxels ရလဒ်) ကို MNI အာကာသအတွင်းစံ template ကိုမှ Spatial ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်ပုံများကို ၈ မီလီမီတာအပြည့်အကျယ်နှင့် isotropic Gaussian kernel တွင်အပြည့်အဝအကျယ်ရှိသည်။
စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် GLM (ယေဘုယျ linear မော်ဒယ်) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို activation ကာလကိုတစ်မိနစ်ကြာချိန်သုံးခုအဖြစ်အစောပိုင်း၊ အလယ်နှင့်နှောင်းပိုင်းအဆင့်များတွင်စိတ် ၀ င်စားသူသုံး ဦး အဖြစ် ခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များ၏အုပ်စုတစုလုံးနှင့်ကိုက်ညီသော activated area များကိုရှာဖွေရန် voxel ပညာရှိပုံသေအကျိုးသက်ရောက်မှုအုပ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုနမူနာတစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုသည်။ t-tests (p <0.05) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်လုပ်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှု၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း (FALBA) (24), activation ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အရေအတွက်တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု (%) ကိုပေးထားတဲ့ခန္ဓာဗေဒofရိယာ၏ voxels စုစုပေါင်းထဲက activated voxels ၏ရာခိုင်နှုန်းကသတ်မှတ်ပါတယ်နှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု activation ၏အညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အစောပိုင်းနှင့် REST နှိုင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်မှု, အလယ်အလတ် REST နှင့် RATE နှိုင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်
အဆင့်တစ်ခုစီနှင့်အနားယူသည့်ကာလအကြားခြားနားချက်များကိုအဓိက ဦး နှောက်ဒေသများ၏စိတ်ဝင်စားမှု (ROIs) ၏လှူဒါန်းမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုမြင်ကွင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
Visual Sexual Stimuli ၏ပုဂ္ဂလိကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ပါ ၀ င်သည့်ဘာသာရပ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုများကိုအဆင့် ၁ မှ (သုည) အထိ ၅ အထိ (အများဆုံးတိုးမြှင့်ခြင်း) အပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်သည်။ အစီရင်ခံထားသောရမှတ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ±စံသွေဖည်မှုစံသတ်မှတ်ချက် - SD) သည်ဆွဲဆောင်မှုအတွက် ၂.၉ ± ၀.၆၂ နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက် ၃.၀ ± ၀.၈၈ ရှိခဲ့သည်။စားပွဲတင် 1).
ပုံ 1 ပုံသေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ဝင်သောပုံစံများဖြင့်အုပ်စုရလဒ်ကိုဖော်ပြသည်။p <0.05), အစောပိုင်းကာလအတွင်း (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) လယ်၊သင်္ဘောသဖန်း။ 1B) နှင့်နှောင်းပိုင်း (သင်္ဘောသဖန်း။ 1C) ကြွင်းသောကာလနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်ဆင့်အသီးသီးသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဦး နှောက်မြေပုံရေးဆွဲခြင်း (ICBM) ၏ Colin Holmes 27 (ch2) ပုံစံပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဇယား 2, , 33 နှင့် and44 ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အနှစ်ချုပ်ကိုအဓိပ်ပာယ်ဖြင့်ပြပါ။p <0.05) မှထုတ်ယူခဲ့သော ပုံ 1: အစောပိုင်း (စားပွဲတင် 2) လယ်၊စားပွဲတင် 3) နှင့်နှောင်းပိုင်းအဆင့်များ (စားပွဲတင် 4).
ဒေသဆိုင်ရာ activation မြေပုံများp <0.05) အုပ်စုတစ်စုရလဒ်များမှရရှိသော။ Activation Contrast များကို ch2 template ပေါ်တွင် overlay လုပ်ထားသည်။ အစောပိုင်းအဆင့်နှင့် REST ကာလ (A), အလယ်အလတ်အဆင့် REST ကာလနှိုင်းယှဉ် (B) နှင့် REST ကာလနှိုင်းယှဉ်နှောင်းပိုင်းဇာတ်စင် (C).
Fixed-Effect ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် One-Sample ကိုအသုံးပြုခြင်းမှယောက်ျားအုပ်စုရလဒ်များ t စမ်းသပ်မှုများ (တံခါးခုံကိုအရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <0.05)
One-Sample ကိုသုံးပြီး Fixed-Effect Analysis မှအမျိုးသားအုပ်စုရလဒ် t စမ်းသပ်မှုများ (တံခါးခုံကိုအရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <0.05)
One-Sample ကိုသုံးပြီး Fixed-Effects Analysis နှင့်အထီးအုပ်စုအထီး t စမ်းသပ်မှုများ (တံခါးခုံကိုအရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <0.05)
ပုံ2ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။p <0.05) အသီးသီး REST ကာလနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစောပိုင်း၊ အလယ်တန်းနှင့်နှောင်းပိုင်းအဆင့်များ။ MID အဆင့်ကိုအစောပိုင်းအဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ ဦး နှောက်ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ယုတ်ညံ့သည့် frontal gyrus၊ ဖြည့်စွက်မော်တာ,ရိယာ၊ hippocampus၊ caudate nucleus ၏ ဦး ခေါင်း၊ နှင့် fusiform gyrus ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အစောပိုင်းအဆင့်ကို MID အဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် putamen၊ globus pallidus၊ pons၊ အထူးသဖြင့်, globus pallidus နှင့် pons MID ဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းအဘယ်သူမျှမလှုပ်ရှားမှုလြှော့။
အနားယူခြင်းအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း။ အဆင့်တစ်ခုစီအတွင်းလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏အဓိကသော့ချက်ဒေသများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (p <0.05) ။
LATE ဇာတ်စင်ကို MID အဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ROIs များသည် hippocampus မှအပသိသိသာသာတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
ပါ ၀ င်သည့်ဘာသာရပ်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနှိုးဆွပေးသည့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုသတ်မှတ်သည် ကြွင်းသောကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ (သဖန်းသီး။ 2), ကျနော်တို့လိင်စိတ်နှိုးဆော်ခြင်းစဉ်အတွင်းသုံးမိနစ်ကြာကြာဖြတ်ပြီးသော့ချက် ROIs အတွက် spatiotemporal activation ပုံစံများကိုမြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
အမြင်အာရုံလိင်စိတ်နိုးထမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်စင်တာများအားအကဲဖြတ်ရန်မကြာမီကပြုလုပ်ခဲ့သည် သို့သော်ဤလေ့လာမှုအများစုသည်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များနှင့်နိဂုံးများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊6-15) ။ ကွဲပြားခြားနားသောတွေ့ရှိချက်များအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအခြေခံအဆင့်များနှင့်နှိုးဆော်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာတက်ကြွစွာပါဝင်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်စံညွှန်းများမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအားလူ့ ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း၏သဘောတူချက်ကိုတင်ပြရန်မှာအလွန်ခက်ခဲကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဒီလေ့လာမှုကပြissueနာကိုမတူညီတဲ့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကဆန့်ကျင်တဲ့ရလဒ်အချို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၊ အဝိုင်းအဝိုင်းမဟုတ်တဲ့နိုးကြားမှုနဲ့လိင်စိတ်နိုးထမှုတွေမှာပါ ၀ င်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဦး နှောက်ယန္တရားကိုသက်ဝင်စေဖို့ ၃ မိနစ်ကြာကြာတဲ့အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းအဆင့်မှ စ၍ amygdala ရှိ LATE အဆင့်၊ ယုတ်ညံ့သည့် frontal gyrus၊ သာလွန်သော occipital gyrus၊ fusiform gyrus၊ ဖြည့်စွက်မော်တာ,ရိယာ၊ caudate နျူကလိယနှင့် midbrain ဒေသများသို့တိုးမြှင့်ခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။ အစောပိုင်းအဆင့်သည်အစောပိုင်းလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတုန့်ပြန်မှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာသိမြင်မှု၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးကြားမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ) ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်သည်ရှုထောင့်များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသော ဦး နှောက်စင်တာများကိုဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ လိင်အင်္ဂါဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုစတင်ခြင်းဥပမာ - ရှည်လျားသောအချိန်ကာလနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော penile tumescence ၏အမြင်၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများနှင့် LATE အဆင့်သည်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သည်။ မြင့်မားသောလိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောနှိုးဆွခြင်း (14) ။ ထို့ကြောင့်၊ အဆင့်သုံးဆင့်တွင်အထက်ဖော်ပြပါဒေသများ၌ပိုမိုတက်ကြွစေခြင်းကသိမှုနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများသည်ကွဲပြားသောယန္တရားများနှင့်တိုက်နယ်များမှတဆင့်လည်ပတ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။25).
ထိုမှတပါး, ငါတို့ erotic အမြင်အာရုံဆွကာလအတွင်း midbrain ဒေသများရှိ variable ကို activation ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ sustia nigra နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်areasရိယာများသည် dopamine ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လိင်တံထခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နိုးထမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ပုံရသည် (26, 27) နှင့် dopamine အထီးလိင်အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းသိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (9, 27) ။ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်စမ်းသပ်ချက်များအရ midbrain တည်ဆောက်ပုံသည်စိုက်ထူခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။28, 29) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရလဒ်သည်အမျိုးသားများ၏လိင်အင်္ဂါတုတုံ့ပြန်မှုနှင့်နှိုးဆွမှု၏ပုဂ္ဂလဒိive္အကဲဖြတ်ချက်များအကြားကောင်းမွန်သောသက်သေသာဓကဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
အစောပိုင်းအဆင့်တွင်အခြားအဆင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် thalamus နှင့် hypothalamus နှစ်ခုစလုံးသည်မြင့်မားသော activation ကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် hypothalamus ၏ activation လူ့အတွက်ကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ခဲ့သည် (11) ။ ဤပconflictိပက္ခဖြစ်သည့်ရလဒ်သည်တိရိစ္ဆာန်စာပေတွင်ဖော်ပြထားသောကွဲလွဲချက်တွေ့ရှိချက်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များ၌ပါ ၀ င်ပတ်သက်သောလိင်စိတ်နှင့် ဦး နှောက်ဒေသများကိုသက် ၀ င်မှုအကြားဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။30-32).
နောက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဖွဲ့စည်းပုံမှာ amygdala ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ amygdala ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလိင်လှုံ့ဆော်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကို processing အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ have ပုံရသည်။ အကယ်၍ လှုံ့ဆော်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်သည်ဟုဆိုပါက amygdala သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသို့ ဦး တည်သော neurobiological ဖြစ်ရပ်များ၏ကက်စကိတ်ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ လှုံ့ဆော်မှုကိုအနုတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျှင်၎င်း amygdala သည်မည်သည့်နောက်ထပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုတားဆီးမည်သို့မဟုတ်လုံးဝတားဆီးလိမ့်မည်နည်း (5) ။ fMRI လေ့လာမှုများတွင် amygdalar တုန့်ပြန်မှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်လွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုများကိုလူ့မဂ္ဂလာ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများနှင့်အချို့သောပconflictိပက္ခများရှိနေသည် (6, 10, 13, 15) အခြားသူများနှင့် activation တစ်ခုကိုသတင်းပို့ခြင်း (3, 8, 12, 14) မည်သည့် amygdalar တုံ့ပြန်မှုမပြခဲ့ပါဘူး။ အဖြစ်များသည်ယခင်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ မဂ္ဂဒလာ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများသည် Erectile လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းအကြံပြုကြသည်။33, 34).
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင် amygdala ၏ activation ပုံစံသည်အခြားအဆင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် LATE အဆင့်တွင်မြင့်မားသော activation ကိုပြသခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ပထမမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမည်သည့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမျှမတွေ့ရပါ။ ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အခြားလေ့လာမှုများ (9, 11) penile စိုက်ထူစဉ်အတွင်း amygdala activation အတည်ပြုနိုင်ခြင်းရှိကြ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာ amygdala ကိုပိတ်ခြင်းအော်ဂဇင်နှင့်ဆက်စပ်သော (35) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် hypothalamus နှင့် amydala ၏ activation သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အလိုဆန္ဒကဲ့သို့သောလိင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုသိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများသာရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
ဖြည့်စွက်မော်တာareaရိယာ insula ၏ activation ပုံစံများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်, ဤရလဒ်များကိုအခြားလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် (9, 11) ။ အထူးသဖြင့်, insular ဒေသအလယ်တန်း somatosensory cortex ၏နီးကပ်တည်ရှိသည်နှင့် insular ဒေသက bidirectionally ကချိတ်ဆက်လျက်ရှိ၏ နှစ် ဦး စလုံးဒေသများအဝင်ဝင်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများ၏သိမြင်မှုအကြောင်းအရာများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သော visceral နှင့် somatosensory သဘောထားအမြင် relay (9, 10) ။ အစောပိုင်းလိင်မှုနှိုးဆွတုံ့ပြန်မှု (သိမြင်မှု, စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု) ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတော်လေးတိုတိုလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကာလ (21 s ကိုကြာမြင့်စွာ) နှင့်နေဆဲခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သောယခင်လေ့လာမှုအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ stimulation လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြသခဲ့သည် စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ပတ်သက်သောဆက်စပ်မှုရှိသောဒေသဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မော်တာပုံရိပ်တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်ရှေ့တန်းမြင်ကွင်းနေရာများတွင်ဖြစ်သည်။14).
ထို့အပြင်ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည့်လေ့လာချက်အရ hypothalamus၊ anterior cingulate gyrus နှင့် insular နှင့် secondary somatosensory cortices များကိုဗီဒီယိုကလစ်များကြည့်ခြင်းဖြင့်သာအသက်သွင်းနိုင်ကြောင်းသုတေသီများကနိဂုံးချုပ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်သင့်သည် (10).
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီလေ့လာမှု BOLD-based fMRI ကိုအသုံးပြု။ သက်ဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဒေသများ၏ activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်သုံးဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးလိင်စိတ်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ် spatiotemporal ဒိုင်းနမစ်အပေါ်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ ဤလေ့လာမှုသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အလားအလာရှိသောလက်တွေ့အသုံးချမှု၏အမြင်မှအရေးကြီးသောလက်တွေ့ကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုကိုရီးယားအစိုးရ (MOEHRD၊ အခြေခံသုတေသနမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေ) (KRF-2007-211-D00124) မှထောက်ပံ့သောကိုရီးယားသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းမှထောက်ပံ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကိုကိုရီးယားသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာဖောင်ဒေးရှင်း Grant ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည် (MEST; 2009-0077677)
1. Levin R, Riley A. လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုဇီဝကမ္မဗေဒ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 6: 90-94 ။
2. Schober JM, Pfaff sexual လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ။ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် Res Clin Endocrinol Metab ။ 2007; 21: 445-461 ။ [PubMed]
3. Stoléru S, Grégoire MC, Gérard D, Decety J, Lafarge E, Cinotti L, et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ Neuroanatomical ဆက်စပ်မှု။ လိင်လိင် Behav ။ 1999; 28: 1-21 ။ [PubMed]
4. Redouté J, Stoléru S, Grégoire MC, Costes N, Cinotti L, Lavenne F, et al ။ လူ့ယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2000; 11: 162-177 ။ [PubMed]
(၅) Graziottin (အေ) လိင်စိတ်နိုးထမှု - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Mens ကျန်းမာရေးကျား။ 5; 2004: 1-215 ။
6. Redouté J, Stoléru S, Pugeat M, Costes N, Lavenne F, Le Bars D ။ ကုသနှင့်ကုသမှုမရှိဘဲ hypogonadal လူနာများအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Psychoneuroendocrinology ။ 2005; 30: 461-482 ။ [PubMed]
7. Stoléru S, Redouté J, Costes N, Lavenne F, Bars DL, Dechaud H စသည်တို့။ hypoactive လိင်အလိုဆန္ဒရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2003; 124: 67-86 ။ [PubMed]
8. Bocher M, Chisin R, Parag Y, Freedman N, Meir Weil Y, Lester H, et al ။ လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှောက်နှေးကွေးသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ကွဲယောက်ျားများတွင် 15O-H2O PET လေ့လာမှုဖြစ်သည်။ Neuroimage ။ 2001; 14: 105-117 ။ [PubMed]
9. Arnow BA, Desmond JE, Banner LL, Glover GH, Solomon A, Polan ML, et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦး နှောက်။ 2002; 125: 1014-1023 ။ [PubMed]
၁၀။ Ferretti A, Caulo M, Del Gratta C, Di Matteo R, Merla A, Montorsi F, et al ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏ဒိုင်းနမစ် - fMRI မှထုတ်ဖော်ပြထားသော ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းများ။ Neuroimage ။ 10; 2005: 26-1086 ။ [PubMed]
11. Moulier V, Mouras H, Pélégrini-Issac M, Glutron D, Rouxel R, Grandjean B, et al ။ လူ့အထီးများတွင်ဓာတ်ပုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked penile စိုက်ထူ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု။ Neuroimage ။ 2006; 33: 689-699 ။ [PubMed]
၁၂။ Park K၊ Seo JJ, Kang HK, Ryu SB, Kim HJ, Jeong GW ။ penile စိုက်ထူခြင်း၏ ဦး နှောက်စင်တာများအကဲဖြတ်ဘို့အအသွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခို (BOLD) အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI ၏အလားအလာအသစ်။ Int J Impot Res ။ 12; 2001: 13-73 ။ [PubMed]
13. Karama S, Lecours AR, Leroux JM, Bourgouin P, Beaudoin G, Joubert S, et al ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုစဉ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတွင် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သည့်နေရာများ။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2002; 16: 1-13 ။ [PubMed]
14. Mouras H, Stoléru S, Bittoun J, Glutron: D, Pélégrini-Issac M, Paradis AL, et al ။ ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကို ဦး နှောက်ပြုပြင်ခြင်း - အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2003; 20: 855-869 ။ [PubMed]
၁၅။ Hamann S၊ Herman RA, Nolan CL, Wallen K. အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကို amygdala တုံ့ပြန်မှုတွင်ကွဲပြားကြသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 15; 2004: 7-411 ။ [PubMed]
16. Yang JC, Jeong GW, Lee MS, Kang HK, Eun SJ, Kim YK, et al ။ psychogenic amnesia ၏ functional MR ပုံရိပ်: တစ် ဦး အမှုအစီရင်ခံစာ။ ကိုရီးယား J ကို Radiol ။ 2005; 6: 196-199 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17. ယန် JC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်လူနာအတွက်အလုပ်လုပ် neuroanatomy: အသွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခိုအလုပ်လုပ်တဲ့ MR ပုံရိပ်။ ကိုရီးယား J ကို Radiol ။ 2004; 5: 87-95 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18. Maravilla KR, ယန်စီ။ လိင်နှင့် ဦး နှောက် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန် fMRI ၏အခန်းကဏ္။ ။ Int J Impot Res ။ 2007; 19: 25-29 ။ [PubMed]
19. Friston KJ, Ashburner J, Frith CD, Poline JB, Heather JD, Frackowiak RSJ Spatial မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပုံရိပ်တွေပုံမှန်။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 1995; 2: 165-189 ။
et al 20. Friston KJ, Holmes AP, Poline JB, Grasby PJ, Williams SCR, Frackowiak RSJ ။ fMRI အချိန် - စီးရီး၏သုံးသပ်ခြင်းပြန်လည်လည်ပတ်။ Neuroimage ။ 1995; 2: 45-53 ။ [PubMed]
21. Friston KJ, ကေတီဟုမ်း AP, Worsley KJ, Poline JP, Frith CD ကို, Frackowiak RSJ ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာစာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: အထွေထွေ linear ချဉ်းကပ်။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 1995; 2: 189-210 ။
22. Friston KJ, Williams S, Howard R, Frackowiak RS, fMRI အချိန်စီးရီးများမှ Turner R. လှုပ်ရှားမှုနှင့်သက်ရောက်မှုများ။ Magn Reson Med ။ 1996; 35: 346-355 ။ [PubMed]
23. Hajnal JV, Myers R, Oatridge A, Schwieso JE, Young IR, Bydder GM ။ ဦး နှောက်၏အလုပ်လုပ်ပုံရိပ်တွင်လှုံ့ဆော်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းရွေ့လျားမှုကြောင့်အပိုပစ္စည်း။ Magn Reson Med ။ 1994; 31: 283-291 ။ [PubMed]
24. Lee JM, Jeong GW, Kim HJ, Cho SH, Kang HK, Seo JJ, et al ။ pixel အနုတ် algorithm ကိုအသုံးပြု။ လူ့ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်တိုင်းတာခြင်း။ J ကိုကိုရီးယား Radiol Soc ။ 2004; 51: 165-177 ။ [ကိုးရီးယား]
၂၅။ Janssen E၊ Everaerd W၊ Spiering M၊ Janssen J. အလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲပုံစံဆီသို့။ J Sex Res ။ 25; 2000: 37-8 ။
26. Kapp B ကို, ကာainနအမ်နှိုးဆော်ခြင်း၏အာရုံကြောအခြေခံ။ In: Smelser N၊ Baltes P၊ အယ်ဒီတာများ။ လူမှုရေးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏နိုင်ငံတကာစွယ်စုံကျမ်း။ အောက်စ်ဖို့ဒ: Elsevier သိပ္ပံလီမိတက်; 2001 စစ။ 1463-1466 ။
27. Giuliano က F, Allard ဂျေ Dopamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို။ Int J Impot Res ။ 2001; 13: S18-S28 ။ [PubMed]
28. MacLean PD, Ploog DW ။ penile စိုက်ထူ၏နှောက်တင်ဆက်မှု။ J ကို Neurophysiol ။ 1962; 25: 29-55 ။
29. MacLean PD, Denniston RH, Dua အက်စ်။ penile စိုက်ထူခြင်း၏ ဦး နှောက်ကိုယ်စားပြုမှုဆိုင်ရာနောက်ထပ်လေ့လာမှုများ - caudal thalamus, midbrain နှင့် pons ။ J ကို Neurophysiol ။ 1963; 26: 273-293 ။
၃၀။ Michael RP, Clancy AN, Zumpe D. အကျိုးသက်ရောက်မှုများ Macaques အမျိုးသားများ၏ ဦး နှောက်ရှိ c-fos expression ကိုမိတ်လိုက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Physiol Behav ။ 30; 1999: 66-591 ။ [PubMed]
31. Ferris CF, Snowdon CT၊ King JA, Sullivan JM, Jr, Ziegler TE, Olson DP, et al ။ Non- လူ့မျောက်ဝံများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ activation ။ J ကို Magn Reson ပုံရိပ်။ 2004; 19: 168-175 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32. Perachio AA, Marr LD, Alexander M. ယောက်ျားလေးမျောက်များတွင်လိင်အပြုအမူသည် preoptic နှင့် hypothalamic byရိယာများ၏လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Brain Res ။ 1979; 177: 127-144 ။ [PubMed]
33. ရော်ဘင်ဆင် BW, Mishkin အမ် Penile စိုက်ထူ Macaca mulatta အတွက် forebrain အဆောက်အ ဦ များမှ evoked ။ Arch Neurol ။ 1968; 19: 184-198 ။ [PubMed]
34. Liu YC, Salamone JD, Sachs bd ။ medial preoptic areaရိယာနှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယမှာတွေ့ရှိရပါသည်: copulatory အပြုအမူနှင့်အထီးကြွက်များတွင် noncontact စိုက်ထူအပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှု။ J ကို Neurosci ။ 1997; 17: 5245-5253 ။ [PubMed]
လိင်တံ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်း 35. Georgiadis JR, Holstege G. လူ့ ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း။ J ကို Comp Neurol ။ 2005; 493: 33-38 ။ [PubMed]